Rosia: Rongony atsindrona no antony voalohany miteraka ny VIH/SIDA · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2018 11:25 GMT
Raha i Afrika Atsimon'i Sahara no mitoetra ho faritra mizaka ny VIH indrindra, tatitra iray navoakan'ny UNAIDS (Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny SIDA) no nilaza fa mampanahy ny fitomboan'ny tranga any amin'ny faritra hafa tahaka an'i Rosia. Maro amin'ny manampahaizana manokana momba ny VIH/SIDA ihany koa no naneho ny ahiahiny fa miatrika fielezan'ny valan'aretina VIH/SIDA i Rosia sy ireo firenena tao amin'i Firaisana Sovietika teo aloha. Fa tsy tahaka ireo any amin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao, tamin'ny fampiasaina fanindromana fanafody no nahazoan'ny ankamaroan'ny ao Rosia VIH.
Mihamitombo ny fielezan'ny valan'aretina VIH ao Rosia, na dia tsy haingana toy ny tamin'ny taompolo 1990 aza. Miovaova ny fanombanana, saingy azo eritreretina fa efa hahatratra iray tapitrisa ny isan'ny olona miaina miaraka amin'ny VIH ao Rosia. Ny fampiasana rongony (na fanafody) atsindrona no lalana voalohany ifindran'ny VIH — io no tompon'antoka amin'ny roatokon'ny tranga VIH vaovao ao tamin'ny taona 2006. Mamelabelatra ny lohahevitra i Neil Smith, namoaka lahatsoratra ao amin'ny docshop.com.
Ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina, miaraka amin'ny VIH/SIDA no lasa olana lehibe indrindra ao Rosia rehefa rava ny Firaisana Sovietika, satria rehefa misokatra ny sisintany dia lasa mora kokoa ny fidiran'ny mpivarotra rongony tsy ara-dalàna. Ankehitriny tombanana fa manodidina ny 1,5 tapitrisa ka hatramin'ny 3 tapitrisa ny isan'ny olona mpanjifa rongony atsindrona ao Rosia, manindrona heroinina sy ireo rongony hafa fanondran'ny mpanao azy. Maro amin'ireo mpanao azy no mampiasa fitsindrona vao avy nampiasaina, ka mampitombo ny herijika hifindran'ny VIH.
Ao amin'ny bilaoginy, Kh. Atiar Rahman miresaka momba ny olan'ny fitomboan'ny fampiasana rongony sy ny fiantraikany ratsy.
Fomba iray hanemorana ny fielezan'ny VIH amin'ny alalan'ny fitsindrona efa nampiasaina ny programa fifanakalozana fitsindrona. Mihoatra ny 50 ny isan'ny tetikasa fifanakalozana fitsindrona tao Rosia tamin'ny taona 2007. Iray amin'ireny programa ireny no velomin'ny Humanitarian Action Fund, miorina ao St. Petersburg, izay miasa amin'ny alalan'ny hopitaly mandehandeha ambonin'ny bus iray nohavaozina. Miasa amin'ny alina mijanonjanona any amin'ireo faritra falehan'ny mpiankin-doha amin'ny rongony ny bus ary manolotra fanjaitra sy fitsindrona madio, ary manolotra servisy ara-tsosialy sy ara-pahasalamana hafa koa. Ao amin'ity lahatsary, itantaran'ny mpanorina ny fikambanana, Sasha Tsekhanovich, ny ezaka ataony sy ny fanilikilihana mihatra amin'ny mpiankin-doha amin'ny rongony.
Fomba iray hafa lazain'ny manampahaizana ara-pahasalamana maro ho kitro ifaharana hifehezana ny fielezan'ny VIH eo amin'ny mpandrongony atsindrona ny fitsaboana amin'ny alalan'ny solon-drongony. Ohatra, ny fanomezana methadone, endrika ôpioma sentetika, ho an'ireo miankindoha amin'ny heroinina hanampy azy ireo hiala amin'ny heroinina. Tsy tondroina hitsaboana any Rosia anefa ny Methadone, ary heverina ho fady ny miresaka izany. Tamin'ny fiandohan'ity taona 2008 ity ny lehiben'ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny firenena no nilaza fa tsy vonona handray fitsaboana fampidirana methadone hanoloana heroinina i Rosia. Takelaka iray ao amin'ny bilaogy Drug Rehab nanazava bebe kokoa avy eo.
Na izany aza dia asongadin'ny manampahaizana manokana fa tsy ny mpandrongony ihany no tratran'ny VIH/SIDA ao Rosia. Mitombo ihany koa, hatramin'ny faran'ny taompolo 1990s ny fifindrana amin'ny alalan'ny firaisana tsy voaaro eo amin'ny lahy sy ny vavy, ary misy ny karazam-pifaninanana eo amin'ny mpivaro-tena sy ny fampiasana rongony atsindrona. Unkie Dave, mibilaogy ao amin'ny Booming Back, milaza fa ny lakilen'ny fihenan'ny valan(aretina VIH amin'ny ankapobeny dia ny mijery ny sary iray manontolo.
Saripikan'ny Close Up Syringe avy amin'i big_chocolate_monster ao amin'ny Flickr.